निषेधाज्ञा लगाउन सीडीओका केही उटपट्याङ निर्णय ! « GDP Nepal
निषेधाज्ञा लगाउन सीडीओका केही उटपट्याङ निर्णय !
Published On : 28 June, 2021 2:27 pm
सिडियो सापलाइ मेरो प्रश्न, सार्वजनिक यातायातमा जोड बिजोर लागु गर्दा त्यसले सार्वजनिक यातायातमा भिड घटाउँछ कि बढ्छ ?
२०७७ भदौ १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम रहेको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा देखि कर्फ्युसम्म लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दियो । सबै स्थानमा एकै पटक लकडाउन आवश्यक पनि नहुन सक्ने र लामो समय देखि एकोहरो लकडाउन लगाउँदा देखिन थालेको विरोधबाट उम्किने उपाय थियो सरकारको ।
सरकारको त्यहीँ निर्णयलाई टेक्दै दोस्रो चरणको कोरोनाको महामारीमा सिडियोबाट नै निषेधाज्ञाको लगाइयो । निषेधाज्ञा बिस्तारै देशभरि भयो तर एक जिल्ला देखि अर्को जिल्ला हुँदै देशभर सिडियोबाट नै आदेश गरियो ।
तर निषेधाज्ञा लगाउने नाममा सिडियो कार्यालयबाट अव्यवहारिक आदेश जारी भए । त्यसले बजारमा भिड घटाउने भन्दा बढाउने काम गर्‍यो । सुरुका दिनमा दैनिक २ घण्टा मात्र खाधन्य पसल खोल्न दिँदा त्यसले बिहान एकै पटक किनमेल गर्ने मानिसको घुइँचो देखिन्थ्यो ।
अझ सबैभन्दा रोचक कुरा त ( म एक दिन बिहान ६ बजे अगाडी नै तरकारी फलफूल किन्न निस्किएको थिएँ । किनमेल गर्दै गर्दा एक्कासि प्रहरीको गाडी तुरुन्तै पसल बन्द गर्न र अटेर गरे राम्रो नहुने आदेश दिन आइपुग्यो । ९ बजेसम्म त पसल खोल्न पाइन्छ नि भनेर हामी छक्क भयौँ । तर जिल्ला प्रशासनको आदेश अनुसार ७ बजेदेखि मात्र पसल खोल्न पाइने आदेश रहेछ ।
त्यही भएर प्रहरी बिहान ७ बजे अगाडी खुलेका पसल पनि बन्द गराउँदै हिँड्यो । बिहानै चिया खान दूध किन्न आएका अरू पनि तीन छक परेर रित्तो हात फर्किए । ७ बजे सबै किनमेलमा निस्किदा एकै पटक चोकमा भिड बढ्यो ।
अहिले लामो दिनको समयमा बिहान ५ बजे छ्याङ्ग उज्यालो भैसकेको हुन्छ । तरकारी फलफूल पसल चलाउनेहरू बिहान ३ बजे नै होलसेल बजारबाट आफ्नो समान ल्याइसकेका हुन्छन् । झिसमिसे उज्यालो हुँदा डेरी र तरकारी पसल खुलिसकेको हुन्छ ।
तर, ९ बजेसम्म मात्र पसल खोल्न पाउनु त ठिकै होला । बिहान ६ बजे खुलेका फसललाई समेत बन्द गर्न आदेश दिनु कति उपयुक्त थियो ? आदेश लगाउने हाकिम सापलाइ ७ बजे मात्र निन्द्राले छोड्ने भएर बाहेक यो आदेश दिनुको अरू कारण थिएन।
उता सिन्धुलीको निषेधाज्ञामा पनि त्यस्तै हास्यास्पद निर्णय भए । निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै बिहान १० बजेसम्म सबै किसिमका पसल एकै समय खुल्न पाउने भयो । निषेधाज्ञालाई थप खुकुलो बनाउँदै त्यो समय १२ बजे पुग्यो ।
अहिले थप खुकुलो पारेको भन्दै पसल खुल्न पाउने समय ३ बजेसम्म पुगेको छ । बजारमा एकै पटक भिड कम गर्न बार अनुसारको पसल खोल्ने निर्णय त उपयुक्त होला तर सबै पसल एकनास खुलिसकेपछि बेलुका ३ बजे पसल बन्द गर भन्नुको औचित्य के हुन्छ होला ? जबकि नियमित रूपमा बजार बन्द हुने अरू ३ घण्टा मात्र वाकी हुन्थ्यो ।
उही सिडियो कार्यालयले कोरोना रोकथामको लागि निषेधाज्ञा लगाउने काम देखाउने बाहेक ३ बजे पसल बन्द गर्नुको कुनै औचित्य थिएँन । केटाकेटीले भाडा कुटि खेले जसरी गरियो निर्णय ।
काठामाडौंमा भोलिदेखि जोर बिजोरको आधारमा गाडी खुल्न दिने निर्णय सिडियो कार्यालयबाट भएको छ । त्यो पनि २५ सिट क्षमता भन्दा माथिका मात्र । सिडियो सापलाइ मेरो प्रश्न ( सार्वजनिक यातायात जोड बिजोरमा चल्न दिँदा त्यसले गाडीमा भिड बढ्छ कि घट्छ ? मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्ने २ सिटे पठाओ खुल्ला गरिदा २५ सिट भन्दा कम क्षमताको सार्वजनिक यातायात किन बन्द ?
सार्वजनिक यातायात खुलिसकेपछि नागरिक कर तिर्न जानै पर्छ , बजार पुरा खुल्ला गरेपछि त्यसले बजारमा दैनिक चहलपहल बढ्छ र सार्वजनिक यातायातमा भिड हुन्छ , सार्वजनिक यातायात खुलेपछि आफ्नो निजी सवारी नभएर अफिस जान रोकिएका जानुपर्ने हुन्छ ।
यसले गर्दा सार्वजनिक यातायातमा भिड बढ्ने निश्चित छ। उसै त काठामाडौंमा कम सार्वजनिक यातायात भएकोले कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने झन् जोर बिजोर लागिगरेपछि त्यसले झन् जोखिम हुन्छ । सिट क्षमता भन्दा यात्रु नराख्न भने पनि सबैलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न हतार हुन्छ , जोर बिजोरले सीमित गाडी हुन्छन् र नागरिक जबरजस्ती यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन् । निजी सवारीमा जोर बिजोर उचित होला , तर सार्वजनिक यातायातमा यो निर्णय कुनै पनि हालतमा वैज्ञानिक छैन ।